Xiddig Haatan U Ciyaara Man City Oo Uu Sir Alex Ferguson U Arkayay Bedelka Paul Scholes | Laacib.net
Xiddig Haatan U Ciyaara Man City Oo Uu Sir Alex Ferguson U Arkayay Bedelka Paul Scholes
14-09-2018 Saed Balaleti Comments Off on Xiddig Haatan U Ciyaara Man City Oo Uu Sir Alex Ferguson U Arkayay Bedelka Paul Scholes
In bedel loo helo ciyaaryahan sida Paul Scholes marnaba ma aheyn wax sahlan laakiin waxaa jiray hal ciyaaryahan oo uu Sir Alex Ferguson maanka ku hayay.
155 gool ayuu United u dhaliyay Scholes, waxa uu ahaa mid farsamo ahaan aad u sareeya waxaana uu awood u lahaa inuu laxameeyo kulamada oo uu go’aamiyo qaabka ay ciyaarta ku soconeyso.
Waxa uu ciyaaraha ka fariistay bishii May 2011 ka dib markii uu kor u qaaday horyaalka Premier League laakiin go’aankaas wuxuu ka laabtay bishii Janaayo 2012 markaasoo Man United ay dhaawacyo diloodeen.
Xiddigii hore ee England ayaa ugu danbeyn si rasmi ah ciyaaraha uga fariistay sannadii 2013, waxaana soo baxday in Ferguson uu doonayay in Ilkay Gundogan oo markaas u ciyaarayay Borussia Dortmund inuu buuxiyo booskii uu baneeyay Scholes.
Leyliyihii hore ee Man United Rene Meulensteen ayaa u sheegay wargeyska London Evening Standard in Red Devils ay isha ku heysay xiddiga Jarmalka iyo saaxiibkiisa Maro Reus.
“Waxaan isha ku heynay Gundogan oo u ciyaarayay Dortmund iyo Reus. Waxaan si gaar ah u daneyneynay Gundogan kaasoo la mic ahaa Scholes, wuxuu awood u leeyahay kubad qaadista, inuu si degdeg ah go’aan u qaato iyo inuu dejiyo laxanka ciyaarta.”
Ferguson, sida Scholes waxa uu ciyaaraha ka fariistay ka dib markii uu kor u qaaday koobkiisii 13aad ee Premier League sannadii 2013. David Moyes ayaa bedelay kaasoo Everton kala soo wareegay Maouane Fellaini ka dib markii uu ku hungoobay saxiixa Cesc Fabregas iyo Thiago Alcantara.
Dhanka kale, Gundogan ayaa u dhaqaaqay Manchester City isagoo noqday saxiixii ugu horeeyay ee Pep Guardiola. Inkastoo uusan isbuuc walba ciyaarin hadana waxa uu muhim weyn u ahaa xilli ciyaareedkii hore oo ay si rikoor ah ku qaadeen horyaalka.